Momba anay - Changzhou Youke Advanced Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Youke Advanced Material Technology Co., Ltd, amin'ny maha-mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny takelaka chromium carbide overlay ambonin'ny tany, dia namorona patanty ara-teknika maro manokana i Youke ao amin'ny indostrian'ny fitafy. Rehefa ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, simenitra, angovo, fambolena, fitrandrahana, fikosoham-bary, rindranasa fanodinana, vokatra mitafy maharitra sy matanjaka dia misy fiovana lehibe amin'ny fanatsarana ny fikorianan'ny dingana sy ny fiasan'ny milina.
Ny takelaka Youke dia nanondrana tany amin'ny firenena 20 mahery, mba hanampiana ny mpanjifanay hahatratra vokatra manantena rehefa manana olana amin'ny fitafy izy ireo. Youke wear solutions dia tsy hoe mpamatsy vokatra fotsiny, nandinika foana ny antsipirian'ny fangatahana mpanjifa izahay ary nanome vahaolana vaovao sy kalitao avo lenta, izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny vokatra sy ny tombony ho azy ireo. Izany no mahatonga anay ho tena mpihaino sy mpiara-miasa ho an'ny mpanjifanay.
Manome vahaolana akanjo vaovao sy avo lenta ho an'ny indostrian'ny fitantanam-pitaovana.
Mba hahatanteraka ny vinavinay dia miezaka izahay:
Mifantoha tsara amin'ny filan'ny mpanjifantsika, ampio ny mpanjifa hampitombo ny ora fiasana, hampihenana ny fandaniana, hampitombo ny vokatra ary hanatsara ny fahasalamana sy ny fiarovana; Mamorona lanja ho an'ny mpiasa sy ny tompon'andraikitra.
Inovation, Integrity, Openness, Fitiavana
DATA SASANY AMIN'NY ORINASA
1, anjara tsena Shina No 1;
2, Isika no lehibe indrindra malama chromium carbide overlay lovia mpanamboatra ao Shina, manana 2 orinasa;
Naondrana tany amin’ny firenena 20 mahery ny vokatray;
Ny tahan'ny fitomboana isan-taona dia mihoatra ny 30%;
faritra orinasa dia mihoatra ny 10000 metatra toradroa;
Ny vokatra isan-taona ny orinasa dia mety ho mihoatra ny 30000 metatra toradroa;
Youke takela-bato malefaka toy ny soson'ny fitafy napetraka ao amin'ny chutes, spouts, hoppers, toerana famindrana sy ny fampiharana hafa iharan'ny olana mitafy, mpanjifa miezaka ny hampitombo ny uptime, hampitombo ny throughput, hampihenana ny vidiny ary hanatsara ny fiarovana.
Ny vokatra maharitra dia ny fototra, ny fitsapana laboratoara & saha dia mampiseho fa ny takelaka Youke Smooth Chromium Carbide Overlay dia haharitra mihoatra ny takelaka vy Quenched & Tempered amin'ny 5: 1.
No.69 #, lalana Jiulong, tanàna Menghe, distrikan'i Xinbei, tanànan'i Changzhou, Sina
8+4 Mitafy takelaka, Fandrefesana: Fandoroana fantsona sy paompy, Grates, Swing Chutes Liners, Efijery mafana, Sinter Feed Tunnels,